Tilmaamaha Safarka Riyadh Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Riyadh (الرياض ar-Riyāḍ) waa caasimada Sacuudi Carabiya. Waxay waxyar ka xigtaa bariga bartamaha dalka bartamaha Tcarga escarpment.
Riyaad waa magaalada ugu weyn Boqortooyada Sacuudi Carabiya. In kasta oo qaabab badan oo madadaalo ah ay xadidan yihiin, haddana waxaa jira meelo xiiso leh oo lagu booqan karo magaalada Riyaad oo ka bilaabma astaamo taariikhi ah illaa taallo kooban oo muujineysa kala-guurka magaalada iyadoo lagu darayo tiknoolajiyad casri ah. Sannadka intiisa badan, cimiladu si xun bay u kulushahay, laakiin waa mid dhexdhexaad ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Gaadiidka kaliya ee lagu kalsoonaan karo ee Riyadh waa gaari: waxaad ku xirnaan laheyd cabs ama waxaad kireysan laheyd gaarigaaga. Guud ahaan qiimayaashu way ka hooseeyaan Riyadh marka loo eego inta badan magaalooyinka kale ee waaweyn ee adduunka. Si kastaba ha noqotee, Riyaadh badanaa waa meel loo tago booqashooyin ganacsi.
Xoogaggii Boqor Cabdulcasiis horaantii qarnigii 20aad
Ilaa qarnigii 16aad, Riyaad waxaa loo yaqaanay "Xajr", oo ah magaalo muhiim ah oo ku taal bartamaha Arabia oo ka bilaabmaysa ugu yaraan qarnigii 3aad CE (oo laga yaabo inay ka sii weyneyd). Qarniyadii dhexe, Xajr wuxuu u adeegi jiray caasimada gobolka Al-Yamamah, oo kuxigeenadiisa ay hogaaminayeen inta badan bartamaha iyo bariga Carabta.
Hoos udhaca ku yimid hantida iyo hantida bartamaha carabiya wixii ka dambeeyay qarnigii 10aad, magaca Al-Yamaama si tartiib tartiib ah ayuu u lumay, Xajrna waxaa ku soo galay magaca "Najd", kaas oo kaliya loola jeeday meelaha jihada galbeed ka fogaa. Magaca Xajr sidoo kale waxaa loo banneeyay magaca "Ar-Riyaad" (oo macnaheedu yahay "jardiinooyinka"), maadaama magaaladii hore ay u jabsatay magaalooyin dhowr ah iyo dhul beereedyo.
Horraantii 1900naadkii, Riyaad waxay ahayd magaalo darbi badan oo carro badan oo ka hooseysa 20,000 oo qof oo ay ku hareereysan yihiin geedo geed timireed, wadis wax ku ool ah, iyo tiro tuulooyin yaryar ah. Riyadh (ama, halkii, deriska deriska ah ee Diriyah) waa guriga awoowe ee al-Sauds. Markii ay kaxeysteen raashidiintu sanadkii 1891, boqor cabdulcasiis ibnu sucuud wuxuu si caan ah ku duulay oo uu dib uqabsaday magaaladan sanadkii 1902. Magaalada waxaa laga dhigay caasimada sacuudiga markii wadanku dhashey 1932, ilaa iyo waqtigaasna si isdaba joog ah ayuu ku koray. Sanadkii 2008, magaalada waxaa lagu qiyaasey inay ku nool yihiin 5 milyan; illaa 2017, dadkeedu waxay kor u kaceen 7.7 milyan oo qof.
Riyaad waa baaxad weyn oo fidsan. Wadooyinka waaweyni waa Wadada King Fahad (طريق الملك فهد tariq al-malek al-Fahd), oo woqooyi ilaa koonfur ka marta magaalada oo dhan, iyo Wadada Makka (aka Wadada Khurais), oo usocota galbeed ilaa bari, iskuna goysa Fagaaraha Qaahira - taas oo runtii ah uun isweydaarsiga dhir.
Degmooyinka ganacsiga casriga ah ee munaasabada (العليا, tiir. Oleyah) iyo Suleymaaniyah, oo ka kooban inta badan xafiisyada iyo hudheelada wanaagsan, waxay ku yaalliin woqooyiga Wadada Makka. Halkan Riyadh labada dabaq ee dhaadheer waxay u adeegaan inay yihiin dhibco hanuuninta toosan: Taallada Faysaliah (midka tilmaamaya) wuxuu ku wajahan yahay dhammaadka koonfureed ee Olaya, halka Xarunta Boqortooyada (dhalada furitaanka) waxay ku taal dhamaadka woqooyiga. Labaduba waxay ku yaalliin inta udhaxeysa Wadada King Fahad iyo marinka is barbar socda ee Wadada Olaya, taas oo ah meesha ugu weyn ee wax laga iibsado ee Riyadh.
Saldhigga taariikhiga ah ee Riyaad waa dhanka koonfureed ee Wadada Makka. Degmada al-Murabba martigalinaysaa barxadaha fidsan ee King Abdul Aziz Historical Park, oo ay kuyaalaan Matxafka Qaranka iyo Qasriga Murabba, halka kiiloo mitir dhanka koonfureed ay kajirto cirka isku shareeray al-Bathaa, waxay martigelisaa cuntada ugu raqiisan magaalada, hoyga iyo dukaamaysiga iyo xarunta shabakadda basaska yaryar. Koonfur sii wali waa Deira, oo udub dhexaad u ah Barxadda As-Sa'ah, oo leh souqs (suuqyada dhaqameed), Qalcadda Masmak, xafiisyada Guddoomiyaha iyo, si ka sii daran, meelihii lagu fulin lahaa.
Waxay ku taal bartamaha dalka, Riyaad waxay la il daran tahay cimilada ugu xun ee Sacuudiga. Heerkulka xagaaga wuxuu si joogto ah uga badan yahay 50 ° C, halka heerkulka jiilaalka uu hoos uga dhici karo eber. Waa lafo qalalan sanadka oo dhan, oo markay dabayshu dhacdo magaalada waxaa badanaa ku daboola carro badan oo ciid ah. Si kastaba ha noqotee, inta kulaylaha ay kululaanayaan, ma aha kuwo qoyan, taas oo si uun u mareysa xanuunka. Habeennadii xagaaga guud ahaan waa loo dulqaadan karaa oo xitaa qofku wuxuu la kulmaa neecow qabow mararka qaarkood, gaar ahaan bannaanka magaalada.
Ka taxaddar in dhowrkii sano ee la soo dhaafay, cimiladu ay u wareegeyso qeybtaan adduunka sidoo kale. Heerkulka ku dhow 50 ° C waxaa badanaa la gaaraa dhammaadka Luulyo iyo Ogosto. Sanadkii 2009, heerkulka magaalada Riyaad wuxuu gaadhay 48 ° C badhtamihii bishii Juun. Gaar ahaan haddii aad xirato suud ganacsi, waa lama huraan inaad qorraxda ka maqnaato.
Riyadh waa meel aad u fog oo laga tago meel kasta, sidaa darteed qallafsanaanta ayaa aad u sarreysa waxaad ku imaan doontaa diyaarad.
Diyaaradda Sacuudi Carabiya
Boqorka Khaled Airport (qiyaastii 35 km (22 mi) waqooyiga magaalada). Qaab dhismeed aad u qurux badan oo qaab dhismeed ahaan u muuqda midab cad iyo midab cidla ah, heer sare ah markii la furay 1983, waayeel si macquul ah ayey u gabowday laakiin waxay weli tahay meel caan ah oo lagu caajiso oo ay ku dhegaan sida Starbucks iyo Costa iyo sidoo kale meelaha maxaliga ah. Fadhiiso meel u dhow (ama, sida la doorbido,) qolka nasashada Al-Fursan si aad uga jarto Wi-Fi-ga bilaashka ah. Waxaa jira seddex boosteejo oo la adeegsado, iyadoo Terminal 2 ay adeegsadaan shirkadaha caalamiga ah, Terminal 1 duulimaadyada caalamiga ah ee Sacuudi Carabiya, iyo Terminal 2 dhammaan duulimaadyada gudaha. Jaangooyooyinku waa isku xigaan oo waxay kuxiran yihiin heerka imaanshaha, marka wareejinta waxaa ka mid ah inaad alaabtaada ku xirto dhowr boqol oo mitir ama, si macquul ah, u shaqaaleysiiso xamaali si uu shaqada u qabto.
Marka laga reebo Saudia, isku xirka tooska ah ee ka baxsan Gacanka iyo Koonfurta Aasiya si la yaab leh ayay u xaddidan yihiin, laakiin xulashooyinka waxaa ka mid ah [Lufthansa] oo ka socda Frankfurt, British Airways oo ka timaadda London-Heathrow, Air France oo ka socota Paris, Turkish Airlines oo ka socota Istanbul-Atatürk iyo Cathay Pacific oo ka socota Hong Kong . Jidka ugu caansan adduunka, in kastoo, laga maro Dubai, halkaas oo laga helo ugu yaraan nus dersin duulimaad maalinle ah. Gudaha, Riyaad waa mid ka mid ah xarumaha waaweyn waxaana jira duulimaadyo aada gees kasta oo ka mid ah Boqortooyada, oo ay ku jiraan safarada saacadaha ku dhow ee Jeddah.
Si ka duwan Jeddah, socdaalka iyo nadiifinta kastamka ee Riyadh caadi ahaan waa mid toos ah oo toos ah (illaa nidaamka kombiyuutarka uu hoos u dhaco mooyee). Joogitaanka khadadka khaldan ee socdaalka ayaa kuu fiicnaan doonta adiga, ama waxaa lagaa cabsiin karaa inaad ku laabato dhamaadka xariiq kale markii aad ku dhufato booska hore (taasoo ka dhigeysa intaas sugeysay oo dhan kuwo aan qiimo lahayn). Safka loogu jiro “Fiisooyinka bixitaanka / gelitaanka” waxaa kaliya loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee ka tagay waddanka si ku meelgaar ah, si ay u soo booqdaan qoyska tusaale ahaan.
Waxay u badan tahay inaad ku soo gasho touts sida ugu dhakhsaha badan markaad ka baxdo caadooyinka, laakiin iska indho tir oo u tag safka taksiga ee banaanka ama isticmaal barnaamijyada taksi ee taksiga sida Uber iyo Careem (xulashada Bariga Dhexe). In kasta oo tagaasida rasmiga ah loo malaynayo inay adeegsanayaan aag salka ku haya sicirka sicirka, oo leh inta badan bartamaha Riyadh oo ku yaal aagga SR45 ama 55, liiska aagagga waxaa lagu heli karaa oo keliya Carabi. Qiimaha magaalada lagu rakibayo waa inuu ku kacaa SR70-90, laakiin inta badan darawalku wuxuu kaliya ku weydiisan doonaa qiimo jaban, oo xitaa laga yaabo inuu wax yar ka jaban yahay. Haddii aad u ogolaatay in uu kaa dhaliyo mid ka mid ah darawalada gaarka loo leeyahay (oo aan ku koobnayn gudaha dhismaha terminaalka sidoo kale bannaanka), hubi in qiimaha aad ku heshiisay uu yahay mid dhab ah oo lagu heshiiyey, ama darawalkaagu wuxuu kuu sheegi karaa inuusan sameyn ' t oggol SR80 laakiin halkii 180, taasoo la micno ah inaad degi doonto 120. Khamaarka ugu fiican ayaa ah tagsi rasmi ah! Beddelka wanaagsan - haddii la bixiyo - waa in la qaato huteel limousine. Kuwani inta badan kama qaalisan yihiin safarka tagaasida, laakiin inta badan waa kuwo tayo sare leh, gawaari raaxo leh halkii ay ka soo degi lahaayeen, isla markaana ay ku xirxiran yihiin kooxo duug ah.
Safarka magaalada wuxuu qaadanayaa qiyaastii 30 daqiiqo oo taraafiko wanaagsan ah. Ha xanaaqin haddii taksiga lagu joojiyo barta kontorool ee booliska (waqtigaas oo darawalka uu xiran doono suunkiisa iyo mobiilkiisa gacanta handsfree, laba ficil oo badanaa la rogo isla marka barta kontoroolka la maro).
Markaad hubinaysid, mid kamid ah garoonka diyaaradaha ayaa sheegaya: waa inaad boorsooyinkaaga dhex martaa raajo kahor intaadan hubin, iyo markaad hesho kaarkaaga diyaaradda, waa inaad midig uga bax isla isla albaabka amniga gadaal si loo helo socdaalka iyo bixitaanka. Ha fuulin jaranjarada - waa dhammaad dhiman oo u horseedaya qolka nasashada.
Tareenka tagaya magaalada Riyadh ayaa sii kordhaya, iyadoo magaaladuna ay tahay xarunta shabakad xawaare sare leh oo cusub oo dhismaheedu socdo. Khadadka qadiimiga ah wuxuu ka socdaa magaalo xeebeedka Dammam, oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Baxrayn, wuxuuna sii maraa Hofuf iyo Al-Hasa. Waxaa jira shan tareen maalin kasta oo leh waqti safar oo ah 3½ saacadood oo dhererkiisu dhan yahay. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira ugu yaraan hal tareen maalin kasta oo ka yimaada Ha'il iyo Buraydah oo ku socda khadka cusub ee Waqooyiga-Koonfurta, oo qaadanaya 2½ saacadood. Mustaqbalka tareenadu waxay ka bixi doonaan Al-Qurrayat oo u dhow xadka ay la wadaagaan Jordan.
Waxaa jira laba saldhig: tareenada ka yimaada Damman ayaa yimaada kan weyn Xarunta tareenka ee Riyadh (محطة قطار الرياض) waxay ku taal koonfurta Bartamaha Magaalada, oo ku taal Waddada Cumar Ibnu Al Khadaab. Midda cusub Xarunta tareenka ee Riyadh SAR waa wadada Ath Thumamah ee waqooyiga magaalada. Labada idaacadoodba, waxaa lagugula talinayaa inay soo muuqdaan ugu yaraan 30 daqiiqo kahor, maadaama aad u baahan tahay inaad ka gudubto amniga intaadan fuulin.
Si wareer leh, tikidhada waa in laga iibsadaa shirkadaha kala duwan iyadoo kuxiran khadka aad ku safreyso. Wadooyinka Tareenka ee Sacuudiga tareenada ka socota Damman halka Shirkadda Tareenka Sucuudiga tareenada waxay ku socotaa khadka Waqooyi-Koonfur.
Xarunta Dhexe ee Basaska (wuxuu si aan fiicnayn ugu yaal degmada Aziziyah oo qiyaastii 17 km koonfur ka xigta bartamaha magaalada; filo inaad bixiso ugu yaraan SR30 taksi uu ku tago halkaas). Shirkadda basaska qaranka SAPTCO waxay maalin kasta basas ka raacaan dhammaan magaalooyinka Boqortooyada gudaheeda. Basaska ka yimaada Dammam waxay qaataan 4½ saacadood oo loo dulqaadan karo, halka ay tahay ciqaab 10-12 saacadood oo laga soo qaado Jeddah ama Mecca. Waxaa jira waddooyin caalami ah oo ka yimaada Amman (19 h), Dubai (14 h), Manama (10 h) iyo Kuwait City (14 h) iyo kuwo kale sidoo kale.
Wadada weyn ee Bariga-Galbeed ee dhex marta Riyadh waa Wadada 40 ee ka timaadda Dammam iyo wadada ka timaadda Baxrayn ilaa Khobar oo leh wadooyin kale oo isku xidha dhinaca woqooyiga Boqortooyada.
Jidadka intooda badan waa laami, in kasta oo heerar kala duwan oo dayactir ah. Heerarka wadista xoogaa way ka caqli badan yihiin kuwa Xarumaha Magaalada, laakiin taxaddar ayaa weli loo baahan yahay. Qaar ka mid ah waddooyinka waawayn waxay u arkaan adeegsi culus baabuurta xamuulka iyo booyadaha shidaalka, inta badan kolonyada.
Riyaad aad bey u tahay magaalo u jiheysan gawaarida, gaadiidka dadweynaha ee Riyaadh si xun uma horumarsan. Ma jiraan cinwaanno waddooyin sida Riyaad oo kale ah, maadaama waraaqaha loo geeyo sanduuqyada xafiiska boostada, sidaas darteed hareeraha ayaa u baahan ogaanshaha astaamaha u dhow meesha aad rabto inaad tagto.
Haddii aad ku safreyso baabuur kuu gaar ah markaa caqli baa inaad sita nidaamka GPS ama si ka sii wanaagsan u isticmaal Khariidadaha Google maaddaama ay u muuqato inay tahay midda ugu casrisan ee nidaamyada hagidda oo leh qodobbada xiisaha leh ee kaladuwan. Qorshee jidkaaga ka hor bilowga safarka. In kasta oo jidad badan, jidad iyo astaamo lagu calaamadeeyay Carabi iyo Ingiriis labadaba haddana ma jiraan waddooyin waaweyn oo muhiim ah, waddooyin iyo jidad laga baxo oo wali ku calaamadeysan Carabiga oo keliya.
Waa muhiim inaad marwalba sidato Aqoonsigaaga Ansaxsan (sida Baasaboor / Aqoonsi Qaran / Iqama). Waxaa laga yaabaa inaad dhibaatooyin kala kulanto helitaanka hoy waxaadna la kulmi kartaa dhibaatooyin ka waawayn haddii lagaa joojiyo mid ka mid ah baraha kantaroolka magaalada (kuwani waxay noqon karaan kuwo joogto ah ama ku meel gaar ah). Awood u la'aanta inaad muujiso aqoonsi sax ah markay booliisku wayddiiyaan ayaa lagaa dhigi karaa xabsi. Sidaa darteed, waxaa kale oo lagugula talinayaa inaad ku hayso faahfaahinta kafaala-qaadahaaga haddii ay dhacdo inaad u baahato gargaar intaad dibadda joogto iyo wax ku saabsan.
Inta badan dadka soo booqda waxay ku tiirsan yihiin caddaanka taksiyada, kuwaas oo ku badan Bartamaha Magaalada laakiin ay adkaan karto in laga helo duleedkeeda ama habeenkii. Dhawaan barnaamijyo raacid raacid ah ayaa ka hawlgalayay Riyadh, gaar ahaan Uber iyo Careem. Taksiyada, darawalada ayaa sida caadiga ah isticmaali doona mitirka iyagoon weydiin haddii aadan soo jeedin qiimo go'an, oo leh bilowga SR5 iyo mitirku wuxuu kor u kacayaa SR1.60/km kiiloomitirkii ugu horreeyay ka dib, safarada ugu badan ee lagu cabbiro gudaha magaalada SR30. Si kastaba ha ahaatee, dadka deegaanku badiyaa waxay doorbidaan inay hore uga gorgortamaan qiimaha, tanina badanaa waxay noqon kartaa jaban intii aad isticmaali laheyd mitirka: burooyinka gaagaaban waxay ka bilaabmaan SR10, safar dheer wuxuu noqon karaa SR15.
Haweenka kelidood ah waxaa loo oggol yahay inay qaataan tagaasida dadweynaha ee diiwaangashan, laakiin dumar badan oo soo booqda iyo ajaanib ayaa doorbidaya inaysan dooran, waxayna doorbidayaan gaadiid ay bixiyaan hudheel, shirkadooda ama xarunta ay leeyihiin.
Heerka luuqada Ingiriisiga ee lagu hadlo way ku kala duwan tahay (hs. Darawalada Hindiya iyo Baakistaan ​​darawalnimo) iyo wax aan jirin, marka isku day inaad raadiso magaca meesha aad ku socoto oo ah Carabi ka hor intaadan safrin. Ragga safarka ah ee keli ah ayaa la filayaa inay ku boodaan kursiga hore, oo ku xiga darawalka, halka haweenku ay tahay inay gadaal fadhiistaan.
Darawallada ayaa inta badan aqoon u leh astaamaha waaweyn ee maxalliga ah, laakiin waxaa lagaa filayaa inaad ogaato jidka aad ku aadeyso halkaas. Keen khariidad iyo lambarka taleefanka qof meesha aad u socoto si aad u wacdo tilmaamaha.
Gawaarida yar yar ee rakaabka qaada (SR3) ayaa ku ruxaya waddooyinka magaalada Riyaad, laakiin kuwani inta badan waxaa adeegsada xoogsatada. Way ku adag yihiin booqdaha caadiga ah inuu isticmaalo: ma laha joogsiyo boosteejo ah, jidadka badanaa waxaa lagu qoraa oo keliya Carabi. Jidadka badankood waxay isugu yimaadaan al-Bathaa, booqdaha xiisaha leh wuxuu isku dayi karaa nasiibkiisa wadada 9, ee ka timaada al-Bathaa ilaa Wadada Olaya.
Xulashada ugu fiican ee ku safridda Riyadh waa baabuurkaaga, oo sida saxda ah uu wado qof kale oo looga bartay shuruudaha, laakiin dad badan oo ajaanib ah ayaa qoslaya oo naftooda wata. Gaadiidka Riyadh waa, marka loo eego halbeega Sacuudiga, caqli fayow: meel kasta oo buurbuur ah oo kor u kacda oo ku taal calaamadaha haadka ayaa gawaarida ku sii haysa in ka badan ama ka yar saf toosan, iyo booliis raadaar ku qalabeysan oo ku socda waddooyinka waaweyn ayaa si weyn u xasilaya kuwa xawaaraha badan. Sidaas oo ay tahay, qaabka wadista maxalliga ah waxaa sadaqo ahaan loogu sifeyn karaa "mid dagaal badan", iyadoo laga weecinayo laynka bidix ilaa wadada ka baxda wadada weyn ee afarta haad ah oo la siman koorsada, iyo bartamaha Riyadh oo kor u kacda maalin kasta inta lagu jiro saacadaha degdegga ah.
Qeybta casriga ah, waqooyiga qeybteeda Riyadh waa dad lugeynaya oo cadowtinimo leh, oo leh 8 dariiq oo laami ah oo ay ka buuxaan gawaarida xowliga ku socda ee loo yaqaan SUV-yada oo wadada ka dhigeysa layli khatar ah. Buundooyinka dadka lugaynaya aad ayey u yaryihiin xitaa nalalka joogsiga waxaad u baahan tahay inaad isha ku hayso darawalada waalan. Ku dar kuleylka xagaaga ee baqdinta leh, waana wax yar oo la yaab leh inaysan jirin dad aad u tiro badan oo socda. In al-Bathaa, in kastoo, xaaladdu ay ku dhowdahay inay rogto: luuqyada qaar ayaa aad u cidhiidhsan ama cidhiidhi ku ah baabuurta, socodkuna waa wadada keliya ee lagu maro.
Laakiin haddii aad tahay nooca aan cabsida lahayn, socodka xitaa waddooyinka waawayn waa hab fiican oo lagu arko magaalada, maadaama aad aad u mashquuli lahayd had iyo jeer kuu dhawaansho la'aan markaad taksi raacayso. Hooska joog, ka taxaddar fiditaanka adiga oo aan lugo lugayn lahayn (ama mid ka mid ah oo ku xaniban dhismaha dartiis), waadna fiicnaan doontaa.
Qalcadda Masmak ayaa habeen shideysa
Riyaad habeenkii, waxaa laga arkay Skybridge ee Xarunta Boqortooyada
Daawashada indhaha ee Riyadh waa jimicsi jahwareer leh waqtiyada taxaddar leh: kaliya ma ahan inta badan goobaha la xiray maalmaha fasaxa (F-Sa) iyo inta lagu jiro saacadaha salaadda, laakiin saacadaha booqashada ayaa loo kala saaraa ragga iyo qoysaska, in kasta oo xoogaa dabacsanaan laga yaabo in la siiyo muwaadiniinta reer galbeedka. Mid ka mid ah nimcada keydinta ayaa ah in goobo badan ay furan yihiin illaa 9PM.
Matxafyada iyo meelaha taariikhiga ah
Qalcadda Masmak (قصر المصمك, Qasr al-Masmak), Deira. 8 AM-duhur iyo 4-9 PM saacadda Sa, M Annaga ragga, Su Tu Th qoysaska. Wadnaha waayeelka Riyaad, tani waxay ahayd qalcaddii ay weerareen King Abdul Aziz iyo raggiisii ​​markii ay ku dhiirranayeen dib-u-heliddii Riyadh ee 1902. Dib-u-habeyn lagu sameeyay 2008 illaa hal inji oo nolosheeda, qaab dhismeedka lebenka dhoobada ayaa hadda u muuqda sidii shalay loo dhisay, laakiin Matxafka ku dhexyaala wuxuu hayaa shaqo aad u wanaagsan oo ah ka sheekeynta sheekada duulaanka waxaana ku yaal sawirro xiise leh oo qadiim ah Riyadh sidoo kale. Hoog, qeybtii labaad waxay u heellan tahay in lagu weyneeyo weynaanta reer Sacuudi wax kasta laga soo bilaabo beeraha illaa waxbarashada. Bilaash
Qasriga Murabba (قصر المربع, Qasr al-Murabba) (oo ku xigta Matxafka Qaranka). Su-F 6-9PM. Qasrigii labaad ee dhoobada dhoobada ahaa ee Riyaad, oo uu dhisay Boqor Abdul Aziz ka dib markuu qabsaday qalcaddii Masmak oo uu is tusay inay tahay inuu dhiso wax ka sii adag in la qabsado. Qaab dhismeedka laba-sheeko runtii wuxuu umuuqdaa mid cabsi badan, laakiin ruqsadaha looma baahna mar dambe inay ku dhiiradaan gudaha, halkaas oo aad ka heli karto aragtiyo ay ka mid yihiin Rolls-Royce-kii ugu horreeyay boqortooyada. Bilaash
Matxafka Qaranka. U fur Su MW Th 9 AM-1PM ragga, 4: 30-9PM qoysaska; Tu 9 subaxnimo- galabnimada dumarka kaliya, 4: 30-9PM ragga; F 4: 30-9PM qoysaska; Sa xiran. Shaki la'aan muuqaalka kore ee Riyadh, matxafkan (oo la furay 1999) waxaa lagu sameeyay tiknoolajiyaddii ugu dambeysay waana mid aad u heli kara booqdayaasha, iyadoo ku dhowaad wax walba oo Ingiriis ah lagu heli karo. Waxaa jira bandhigyo fiidiyoow oo aad u tiro badan iyo tiyaataro yaryar oo aad u maleyneyso inaad maalin dhan ku qaadan karto halkan adoo sameynaya safarro muuqaal ah oo Madain Saleh ah ama daawashada dib u soo celinta dagaalkii Nebi Maxamed ee Madiina. Waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah kiswah maro mar qudha Qaba ka daboolatay Maka. Waqtiga badhkiis, inkasta, waxay u egtahay sida jimicsi dacaayad ah oo ka badan matxafka: bandhigga saxanka tectonics wuxuu ku bilaabmayaa xigasho Quraanka, taariikhda Sucuudiga ayaa ah mid hawada la marinayo, iyo bandhigga dhalashada Maxamed, oo laga keenay isku dhaca iyo buuqa ka Jaahiliyah (da'da jaahilnimada) adoo kor u qaadaya kor u kaca qolka nasashada, iftiinka hore halka heesta malaa'igaha ay heesaan, waxay u badan tahay inay dhiirigelisay in yar oo diinta Islaamka ah. Cabsiyo badan ma aqoonsan doonaan magaca Ingiriisiga, weydiiso deriska Murabba ee deriska la ah (Qasr al-Murabba) halkii. SR10.
As-Sufaat (Fagaaraha Deira). Ku Xiga Masaajidka Weyn iyo mutawwa xarunta, qaybtan aan qormada lahayn ee sibidhka waxaa uyaqaana dadka ajaanibta ah sida Fagaaraha Chop-Chop maaddaama dembiilayaashu ay si cad qoorta uga jareen halkan. Dil toogasho ah waxay dhacdaa subaxa Jimcaha (laakiin isbuuc kasta maahan), salaada duhur kadib. Ka taxaddar in qof kasta oo reer galbeed ah oo ka agdhow lagu yaqaan in safka hore la geeyo laguna qasbo inuu waxaas oo dhan daawado, si loo sii ceebeeyo kuwa la cambaareeyay. Waa mamnuuc in laga qaado sawiro xukun dil ah ama laga duubo muuqaalo.
Xarunta Boqortooyada (المملكة Al-Mamlaka), No. 94, Al Olaya. Maalin kasta 4-11PM. Shaki la'aan waxaa ugu qurux badan Riyaad dhisme casri ah, oo 305 m ah Xarunta Boqortooyada ayaa ah dhismaha labaad ee ugu dheer Sacuudi Carabiya waana muuqaal, gaar ahaan marka la iftiimiyo habeenkii. Xaruntu waxay martigalisaa (qaali) suuq ganacsi oo saddex dabaq ah, oo hal dabaq u gaar ah dumarka, laakiin sababta ugu weyn ee loo soo booqdo waa dabaqa 99aad Skybridge isku xirka labada sare ee jooggoodu yahay 300 m. Sida ugufiican ee loo booqdo makhribka ama wixii ka dambeeya mugdiga, halkan waxaad kaheli doontaa aragtiyo waawayn oo ku saabsan baaxadda magaalada oo ballaadhan laakiin si fiican u shidan. SR35 (Skybridge).
Webi qallalan oo si adag loo qeexay (wadi) wuxuu bilaabmaa qiyaastii 40 km waqooyiga Riyadh wuxuuna u socdaa jihada woqooyi-koonfureed in ka badan 120 km, isagoo soo gelaya cirifka galbeed ee magaalada, oo loo yaqaan Wadi Hanifah. Wadi Xaniifah wuxuu mar ahaa halbowlaha aagga Riyaad, qani ku ah biyaha dhulka hoostiisa, oo ay ka buuxaan geedo timireed iyo beero isla markaana ay ku taxan yihiin xarig magaalooyin yaryar iyo tuulooyin taariikhda oo dhan ah. Tobanaankii sano ee la soo dhaafay, Waadi waxaa loo isticmaali jiray meel ballaaran oo lagu daadiyo biyaha wasakhda ah, bullaacadaha, iyo qashinka warshadaha, laakiin mashruuc dhaqan-celin hami leh oo dhow ayaa hadda la soo gabagabeeyay. Fudud 80 km ah oo dhex mara galbeedka Riyaadh ayaa hada asal ahaan ah 80-km baarkinka lamadegaanka, inkasta oo qaybo badan oo dabaqa Wadi ah ay degan yihiin guryo gaar loo leeyahay iyo beero leh derbiyo dhaadheer. Wadi waxay leedahay dhowr meelood oo laga soo galo, laakiin waxaa laga yaabaa in wadada ugu fudud ay tahay iyadoo la raacayo King Abdullah Wadada galbeed galbeedka jaamacada oo la geeyo magaalada Arqah. Ugu dambeyntiina, waxaad gaari doontaa wareeg ballaaran. Qaado dhanka bixitaanka oo hoos ugu sii jeeda Wadi. Raac wadada xitaa sida ay u socoto oo ay jareyso wadadeeda iyada oo loo marayo Wadi (ha isku dayin inaad u leexato dhinac walba). Ugu dambeyntiina, waxaad gaari doontaa bar kontorool oo booliis, bidixdeeda oo ah barta laga soo galo dabaqa Wadi. Waddo laami ah oo cidhiidhi ah ayaa dhex marta dabaqa Waadi. Adoo usocda dhanka koonfureed, waxaad aakhirka heli doontaa goolal loogu talo galay tamashleynta iyo hilibka lagu dubto ee ujeeda darbiyada Wifi ee u eg geesaha.
In kasta oo ay qalalan yihiin sanadka intiisa badan, wadis si dhakhso leh ayey u qulqulayaan iyadoo qaddar dhexdhexaad ah oo roob leh. Weligaa ha u dhowaan waddo inta lagu gudajiro roobka ama xitaa wixii ka dambeeya. Xitaa in la eego cidhifka marinka wadnaha ayaa qatar noqon kara maadaama Wadi cidhifyadiisu kala jabi karaan inta lagu jiro roobka. Sannad kasta, dhowr qof ayaa lagu soo waramayaa inay daadad ka dhasheen daafaha Sacuudi Carabiya.
Waxay ku taal buur fiirineysa Wadi Xaniifa, Al-Dir'iyyah, oo ku taal duleedka waqooyi-galbeed ee Riyaad, waa guriga ay ku abtirsadaan qoyska boqortooyada Sacuudiga waxayna u noqotay caasimad Sucuudi ah illaa 1818. Burburka magaalada hore ayaa dib loo soo cusboonaysiinayaa loona dayactirayaa. waana loo xiray dalxiisayaasha, laakiin aagga ku xeeran wali wuu u qalmi karaa booqashada inta lagu jiro.
In kasta oo dad yar oo Sacuudiyaan ah ay ciyaaraan golf, haddana waxaa jira koorsooyin golf oo la yaab leh oo wanaagsan. Kii ugu fiicnaa waa koorsadii 18-dalool ee Dirab Golf & Country Club oo ah 30 daqiiqo oo wanaagsan oo lagu wado galbeedka Riyadh. Qaab -dhismeed wanaagsan oo leh cagaar iyo caws soo jiidasho leh, iyo 9 -kii god ee ugu dambeeyay ayaa xitaa daadad ah. Waxay kaloo bixiyaan tennis, dabaasha iyo faras-fuushanka sidoo kale. Waxa kale oo jira koorso gaaban oo aad u fiican oo 9-godad ah oo ku xidhan Hotel Intercontinental oo ku dhow Xarunta dhintay ee magaalada. Wanaagsan laakiin gaaban - sidoo kale daadad. Haddii aad u safarto ilaa 20 daqiiqo waqooyi-bari waxaad ka heli doontaa koorso lama-degaan ah oo aad u wanaagsan oo leh bunni halkii cagaar (meesha la dhigayo waxay ka kooban tahay ciid/saliid isku dar ah halkii caws).
U leexo dhanka galbeed wadada Makka muddo 30 daqiiqo ah, waxaadna gaari doontaa cirifka Tuwaig Escarpment. Markaad sameysid 200-m dhibic fiiqan oo ka timaadda soohdinta Tuwaig illaa Najd-right, waxaad heli doontaa dareemo wanaagsan oo lamadegaan ah oo leh buunbuunyo iyo dabaylo.
U jihada woqooyi-bari ee garoonka diyaaradaha ilaa Thumama sandes, qofku wuxuu ku lug yeelan karaa "dune bashing" 4 × 4 SUVs ama ATVs kiro ah.
Sacuudi Carabiya waa waddan waalan kubbadda cagta, ciyaaraha waaweyn ee ka socda King Fahad Stadium waxay soo jiidan karaan dad gaaraya 50-70 kun, iyagoo abuuraya jawi koronto. Si kastaba ha noqotee, garoomada kubbadda cagta waa ka mamnuuc dumarka.
Wadooyinka waaweyn ee Riyadh wax kale maahan laakiin waa hal suuq oo laga dukaameysto.
Al Faysaliah, Wadada Olaya. Cagta sarta dheer ee Al Faisaliah, tani waa mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ee ugu wanaagsan Riyadh, oo ay ku xareysan yihiin dukaanka weyn ee Harvey Nichols. Maxkamadda cuntada ee dabaqa saddexaad waxay ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan Boqortooyada; midka hoose, dhinaca kale, waa cidlo. Waxaa jira baarkin madadaalo oo ku yaal qaybta hoose ee u dhow albaabka laga soo galo wadada Olaya. Qoysaska kaliya Wed-Jimce.
Al Mamlaka, Wadada Olaya (Xarunta Boqortooyada). Mid ka mid ah suuqyada ugu quruxda badan Boqortooyada, oo leh dabaqa saddexaad Marwooyinka Boqortooyada si gaar ah loogu talagalay haweenka. Maxkamad raashin wanaagsan oo heer hoose ah iyo xitaa makhaayad Planet Hollywood ah.
Buugaagta Jarir (Makatba Jariir), Wadada Olaya (koonfurta Musa ibn Nosayr St). Bakhaarka labada heer ee dukaanka buugaagta ee ugu weyn Sacuudi Carabiya, dukaanka intiisa badan waxaa dhab ahaantii qaatay qalab ballaaran oo kombuyuutar ah, taagan, muusig iyo DVD ah. Joornaalka-Ingiriisiga ugu wanaagsan iyo xulashada buugaagta ee Sucuudiga - taas oo, hoogay, intaas oo dhan ma odhanayso.
Sahara Mall, Isgoyska Wadada King Abdul Aziz iyo Wadada Amiir Abdullah Bin Abdul Aziz. Suuq weyn oo ku yaal dhinaca woqooyi ee magaalada. Suuqa waxaa ku yaal 180 dukaan oo ay ku xareysan yihiin supermarket Tamimi ah waxaana ku yaal waxa laga yaabo inay noqon karto maxkamadda ugu weyn ee magaalada - iyo haddii aadan halkaan ka heli karin waxa aad rabto, ee deriska la ah Sahara Plaza lifaaqa ayaa ka badan.
Suuqa Deegaanka, Tahlia St. Meel aad u fiican oo la booqdo haddii aad ku sugan tahay Tahlia. Waxay leeyihiin dukaanno kaladuwan oo dharka lagu iibiyo iyo weliba makhaayado cunno wanaagsan sida Outback.
Suuqa Granada, agagaarka garoonka diyaaradaha waxaa ku yaal Carrefour, H&M iyo Sun & Sands dukaamo
Othaim Mall, Wadada Bariga Ring (inta udhaxeysa bixitaanka 14 iyo 15). Suuq weyn oo leh summad maxalli ah iyo mid caalami ah, maxkamadda cuntada iyo dhowr maqaaxiyood oo wanaagsan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Suuqyada dhaqanka (souqs)
Souq al-Thumairi (شارع الثميري), Deira (oo ku xigta Qalcadda Masmak). Sidoo kale loo yaqaan Qaraami Souq, kani waa Riyad ugu dalxiis badan, oo aan intaas oo dhan dhaheyn. Waxay ku takhasustay badeecadaha carabiga oo raqiis ah oo qaali ah, sax ah oo been abuur ah, oo ay ku jiraan roogag, dheriyo kafee ah, toorrey, dahab iyo waxyaabo kale oo badan. Badankood waxaa lagu sameeyaa meelo kale, waxna kama jiraan Sacuudi ahaan. Ingiriisiga guud ahaan waa lagu hadlaa, hagagguna waa waajib.
Cunitaanka banaanka waa mid ka mid ah waxyaabaha raaxada yar ee Riyaad - waxaa jira xulasho aad u wanaagsan oo makhaayado ah oo loogu talagalay cunnooyinka kala duwan ee Xalaasha ah, oo ka bilaabma mid raqiis ah oo qalbi furan ilaa qurux iyo qaali.
Khamaarkaaga ugufiican ee raqiiska ah, cunnooyinka buuxiya waa kuwa yar yar ee Riyadh Makhaayadaha Baakistaan ​​/ Hindi, Kaas oo kaa buuxin kara curry iyo bariis ilaa SR11.
cunto Fast Meelo badan ayaa ku yaal Riyaad goobaha laga dukaameysto, oo leh cunno buuxda oo cabitaankeedu celcelis ahaan yahay SR20. Haddii aad rabto wax kale oo aan ahayn hamburgers iyo kebabs caadiga ah, Pizza Hut waxay bixisaa cunto karis salad wanaagsan leh.
Al Fawar, Olaya St (wadada dhinaceeda iyo hal baloog koonfurta ka xigta al-Faisaliah). Cunto cunno raaxo leh oo faraxsan oo reer Lubnaan ah oo bixiya shwarma, kebab, duub iyo waxyaabo kaloo badan. Shwarma SR3 / 6.
Makhaayada Al-Malaz, oo ka baxsan Wadada Olaya (gadaashiisa Holiday Inn al-Qasr). No-frills, xoogaa duullimaad-cunno cunno Koonfurta Hindiya ah oo had iyo jeer la buuxiyo mahadnaqa cuntada dhadhanka leh, qiimaha hooseeya iyo qaybo deeqsinimo leh. Waqtiga qadada, waxaad heli kartaa afar curry (hilib ama veg), pickles, veggies cusub, bariis, chapattis, pappadums, macmacaan iyo shaah, oo dhammaantood leh dib-u-buuxin aan dhammaad lahayn, qiimaha ugu yar ee lagu kalsoonaan karo ee SR6.
Xarunta Casiirka Mama Noura, Prince Abdullah bin Abdul Aziz St, Al-Rahmaniyah (iyo saddex kale oo xayeysiis ah). Silsilad caan ah oo caan ah oo sameysa qaro weyn, is biirsaday casiir cusub sidoo kale, laakiin isku aadka ugu weyn halkan waa kan caanka ah shwarma, oo lagu doodi karo kan ugu wanaagsan Riyadh. Cabir ahaan way yar yahiin laakiin waa ka jaban yihiin SR4 pop, marka dadka badankood waxay dalbadaan ugu yaraan seddex! Liiska (oo ku qoran Ingiriis) sidoo kale wuxuu daboolayaa keega cusub, kebab iyo daweynta Lubnaan. Dhig dalabkaaga oo marka hore bixi, ka dibna safka ka geli xisaabiyeyaasha. Waad ka dhex cuni kartaa miisaska-miisaska-sare ee miisaska dhaadheer ee miraha dhaadheer, laakiin badankood waxay doorbidaan inay qaataan. SR10 hoostiisa.
Makhaayada Qoyska Paragon, Batha (Opp Suncity Supermarket). 5 AM-2AM. Bixinta cunnooyinka caadiga ah ee Malabar, Waqooyiga-Hindiya iyo Shiinaha. Waxyaabaha loo yaqaan 'Paragon specials' waa biriyani, kudukka biriyani (oo loogu adeego dheriga) iyo walxaha kalluunka ee qaab dhaqameedka ah.
Shayax, Xarunta Boqortooyada B1F Maxkamadda Cuntada. Silsilad makhaayado Iiraaniyiin ah oo laga heli karo dhowr goobood oo magaalada ah. Waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo kebab ah iyo nooc ka fiican oo ah Mezze sida tabbouleh, hummus, eggplant, caleen canab iwm Qaybo keli ah oo ka hooseeya SR10, cunno aad u tiro badan SR21.
Yaa Mal Asham, Wadada Olaya (off Musa ibn Nosayr St, next to Jarir Bookstore). Dhamaan jawiga makhaayada weyn ee iskuulka, laakiin waxaa jira xulashooyin badan oo carabi ah laga soo bilaabo shwarma ilaa maraqyada, waxyaabaha la kariyo, fuudka iyo macmacaanka iyo qaabka qaadashada ee “saxaarad iyo dhibic” qodobka dalabka ayaa sahlaya in la doorto (in kastoo ay leeyihiin Liiska Ingiriisiga sidoo kale). Shwarma SR4, cunno buuxa SR15-20.
Cafe Amore, Tahlia St. (oo u socota bariga Tahlia iyadoo isgoyska Olaya ay gadaashaada tahay, makhaayada ayaa ka dhex muuqan doonta safafka maqaayadaha ee safka bidix ah. U leexo dhanka xiga). Malaha makhaayada Talyaani ee ugufiican, jilicsan uguna xirfada badan oo maamusha Riyaad. SR30.
Tuulada Najd, Takhassusi St. (Takhassusi qiyaastii 500 mitir koonfur-bari koonfurta Euromarche). Malaha makhaayada leh qurxinta ugu qurxoon ee Riyadh, cuntada saudi dhaqameedka, waxaad fadhiisan doontaa dabaqa. SR75.
Cabdulwahaab, Tahlia St. (oo ku sii jeedda bariga Tahlia iyadoo isgoyska Olaya ay kaa dambeyso, makhaayada ayaa ka soo muuqan doonta midigtaada.). Makhaayadani waxaa loo qaabeeyey ka dib makhaayad ku taal Beirut oo isku magac ah, makhaayadani waxay si dhakhso leh u noqotay mid ka mid ah makhaayadaha ugu caansan uguna caansan waddanka Lubnaan magaalada. SR30.
Burj Al-Hamaam, Takhassusi St. (Takhassusi ka soo horjeedka Takhassusi Hospital). Mid ka mid ah maqaayadaha qadiimiga ah ee reer Lubnaan ee magaalada ku yaal, maqaayaddan aan qurxinta badan lahayn ayaa leh sumcad waarta. Waxaa si gaar ah loogu yaqaanaa "Sayyadiyya" iyo "Kibbe ee maraqa rummaanka." SR30.
Tokyo, Oruba St. (dhamaadka bariga Oruba St.). Makhaayadani waa makhaayad Jabbaan ah oo ugu da'da weyn magaalada (laga soo bilaabo 1980-yadii). Waxaa la sheegay inay maamusho Jabbaan ayna u adeegto Sushi aad u fiican. Xidhan jimcaha. SR30.
Assaraya, Talatheen St. Makhaayadaan caanka ah ee turkiga waxaa aad loo soo buuxiyaa saacadaha fiidka. Hilibku waa magaca ciyaarta halkan, waxayna ku timaadaa kala duwanaansho badan oo dhadhan fiican leh. Rootiga waa heer sare! SR30.
Qaboojiyaha, Wadada Tahlia. Qaadasho wanaagsan oo TexMex ah oo leh muuqaal Mareykan ah oo muuqaal-iyo-dareen ah. Haddii aad ka timid Waqooyi-bari Mareykanka, Buffalo Wings / Tenders ayaa lagugula talinayaa - hotsauce aad u fiican. SR60.
Qasriga Kuuriya, Wadada Makka (opp Holiday Inn al-Qasr). Cunnooyinka ay maamusho Kuuriya waxay si macquul ah ugu bixinayaan cunnooyinka Kuuriya, Jabbaan, iyo Shiinaha qiimo macquul ah. Caan ku ah bulshada Aasiya ee maxalliga ah. SR50.
Makhaayada Mirage, Wadada Al-Takhassosi, Waqooyiga Galbeed ee Riyaadh (galbeedka dhismaha Boqortooyada). Makhaayada Taiwanese-Saudi ee maamusha Shiinaha ee bixisa cuntooyin kala duwan oo ka imanaya Aasiya oo dhan, ku dheji waxyaabaha Taiwanese ama Shiinaha. Xamaamku waa cunto-kariye weyn oo beddel u ah liistada cuntada fudud ee la shiilay. Makhaayada ayaa aqbashay kooxo ganacsi oo isku dhafan oo jinsi ah. Weydiiso miis dusha ka saaran haamaha kalluunka ee ifaya ee ku yaal bartamaha maqaayada. Gaaritaanka meeshaas way adkaan kartaa maadaama ay ku yaalliin suuq ku yaal dhinac dhinac, ka raadi dusha sare ee pagoda iyo albaabka shiinaha. SAR80.
labada, North Ring Road .. Silsilad makhaayad Talyaani ah oo qoysaska u adeegta. Xulku waa mid hufan, laakiin tayada ayaa ka maqan. Haddii aad tagto, iskuday saxanka Spaghetti Curry - digaag la shiilay, digir, baastada curry cananaaska - waxay u egtahay wax qariib ah, laakiin dhadhan fiican. Haddii aad u socotid koox bachelor ah (ragga oo dhan), qolku dhinac ayuu uga baxayaa adeeg xadidan. SR60.
Guriga Steak, North Ring Road .. Guri silsilad aasaasi ah - u malee Ponderosa - oo leh xulasho hufan ee steaks iyo waxyaabaha kale ee hilibka. Mid ka mid ah meelo badan oo ku yaal Riyadh oo dhan. SR60.
Masraxa, inta udhaxeysa Olaya iyo Wadada King Fahad. ku xigta Pizza Hut oo ku taal Olaya. Teatro waa wax layaableh oo laga helay aagga yar ee u dhexeeya Olaya iyo Wadada Kind Fahad. Kooxda bachelor-ka (kooxda kaliya ee booqatay safarkan) waxay umuuqataa naadi qoob-ka-ciyaar aad uxun. Qolka VIP-da oo aan loo sheegin qofkiiba wuxuu ku kacayaa SR 30 dheeraad ah. Aaggu waa iskudhaf 1960s nalka nalka, laambada lava, kitsch aan caadi ahayn, iyo qol ugaarsade leh xayawaan ugaarsi meel kasta. Ku dar Pink Floyd “Darbiga” (xoogaa nacas ah Boqortooyada) iyo dhowr shaashadood oo shaashad waaweyn ah - goobtu waa god ay ku caweeyaan taageerayaasha isboortiga ee Riyadh. Waxaa naloo sheegay in booska laga iibiyo habeennada kubbadda cagta. Cuntadu waa mid caalami ah oo qaab ahaan iyo celcelis ahaanba ah. Cunnadu waa celcelis, laakiin qurxinta iyo nacasnimada helitaanka goob sidan oo kale ah ee Riyadh ayaa soo jiidan doonta booqashada soo noqoshada inta lagu guda jiro ciyaar kubbadda cagta ah. Waxaa jira dhinac qoys oo umuuqda mid xiise leh. SR60 / SR90 VIP.
Avadh, oo ku taal Tahlia oo ka soo horjeedda waddada ka soo baxda Steakhouse (u gudub Galbeed oo ku taal Tahlia oo ka timaadda Olaya illaa aad ka aragto Avadh bidixda bidix, waddada ka soo horjeedda Outback Steakhouse). Avadh waa makhaayad dhaqameed woqooyiga Hindiya ka tirsan oo ku taal marinka Tahlia (dukaamada / makhaayadaha qaabka reer galbeedka). Qaybta qoyska waa wax fiican. Cuntadu waa mid dhaqameed, mid sax ah, oo qaali ah marka loo eego maqaayadaha kale ee Hindida. Naan iyo rooti waa cusub. Wanka "dum style" wuxuu ahaa saxankii ugu fiicnaa ee kuwa amar lagu siiyay. SR 120 / qof.
Dhadhanka Hindiya, Batha Main Str (Near 2nd Bridge Bridge, oo ka dambeysa Mist-ka dukaanka badan.). joogto ah. Hindida (waqooyiga iyo koonfurta) cuntada qiimahoodu macquul yahay. Goobaha waa hagaagsan yihiin waana nadiif yihiin, suxuunta waxay ka kooban yihiin biryanis macaan iyo tandoors ilaa takhasusyada bariiska koonfurta Hindiya. SR10-40.
Mondo, Intercontinental Hotel 7F (oo ka gudubta Wadada King Fahad kana timaada Wasaaradda Arrimaha Gudaha). Malaha makhaayada ugu qaalisan uguna tayada sareeya ee ku taal magaalada Riyaad, oo leh cunooyin kala duwan oo caalami ah. SR100-300 qofkiiba, oo aan kujirin cashuur, adeeg ama cabitaan.
Al-Nakheel, Xarunta Khozama 7F (oo ku xigta Hotel Al-Khozama). Waxaa loogu yeeraa ugu yaraan maqaayada ugu wanaagsan dalka Sacuudiga hogaamiye caan ah oo safarka ku saabsan, mid ayaa kaliya qiyaasi kara in heerarka Riyadh ay cirka isku shareereen ama meeshan ay noqotay mid hoos u dhac heerkeedu ku eg yahay. Qurxinta oo aan isbeddelayn tan iyo 1970-yadii iyo maqaayad aan la dhiirrigelin (maya a la carte menu) ee istaagga caadiga ah ee Carabiga, booqdayaasha kaliya waxay umuuqdaan kooxo dalxiis iyo martida hudheelka - dadka deegaanku way ogyihiin inaad alaab fiican uga heli karto qayb ka mid ah qiimaha meelo kale. Cunnada cunnada SR110, oo aan ku jirin canshuuraha, adeegga ama cabbitaannada.
Sheraton Riyaad waxay siisaa quraac aad u qani ah quraacda, oo daboolaysa noocyo badan oo ka mid ah badda Mediterranean iyo Bariga Dhexe, iyo sidoo kale cuntada caadiga ah ee yurubiyanka. Makhaayada Talyaaniga ee ku taal dabaqa hoose ee Sheraton Riyadh waa mid aad u fiican. Baastada oo leh sooskeeda cusub ee la diyaariyey ayaa lagula talinayaa.
bannaan: oo ku yaal dabaqa sare ee Xarunta Boqortooyada, makhaayadani waa magac Talyaani ah laakiin dhab ahaantii waxay u adeegtaa cunnooyin caalami ah oo kala duwan. In kasta oo aragtida iyo kharashkuba, cuntadu si gaar ah uma fiicna.
Beerta Fairuz: Makhaayada Lubnaan ee ugufiican fadhiga bannaanka. Ku wadista woqooyi wadada King Fahad, waxyar uun bay ka durugsan tahay Dhismaha Boqortooyada, waxaad ku arki doontaa midigtaada. Goobtu waa qurux badan tahay cunnaduna waa macaan tahay.
Halkee lagu joogayaa Riyadh
miisaaniyadda Ka yar SR200
Iskuday In ka badan SR500
Inta badan hoyga miisaaniyadda ee Riyadh waxay ku taal al-Batha. Waxaa lagugula talinayaa inaad iska hubiso xaalada qolka iyo sida saxda ah ee ay u shaqeeyaan dhamaan qalabka (tusaale TAP / FLUSH / TV / Power Outlets iwm.) Hoteel miisaaniyadeed kahor intaadan soo galin.
Hotelka Al Jazeera, Al Bathaa Street, +966 1 2863863. Huteel qiimo badan oo kuyaala wadada weyn, oo bixisa kali / labalaab SR60 / 120. Hoteelkan gadaashiisa waxaa ku yaal dhisme badan (Nesto Hypermarket) oo laga adeegto iyo baarkinka gawaarida SR5 / 24 hr. (Bixi khidmadda baarkinka kahor & hel rasiidka tirada maalmaha la doonayo haddii kale waxaa laga yaabaa inay ganaax noqoto SR50. Hayso risiidka khidmadda baarkinka ilaa maalinta ugu dambeysa maadaama aad u baahan tahay inaad tusto mar kasta oo aad ka soo baxeyso baarkinka. Waad geli kartaa oo ka bixi kartaa baarkinka inta jeer ee aad jeceshahay ansaxnimada rasiidka).
Al Batraa, Wadada Wadada Al-Dai'ri, +966 1 248 4310. Guryo la qalabeeyay, oo nadiif ah degmada Al-Quds.
Almuthana, Wadada King Fahd (inta udhaxeysa Tahlia St iyo Faisaliah). Huteel casri ah oo casri ah oo bixinaya afar xiddigood oo qiimo macquul ah leh marka loo barbar dhigo noocyadiisa u dhigma, laakiin adeeggu waa mid aan laga fiirsan. Bilaash (laakiin si dhakhso leh uma dhakhso badan) internet wireless, barkad yar oo gudaha ah iyo jimicsi xadidan (wuxuu furan yahay fiidkii). Kafeega mezzanine ee loogu talagalay quraacda quraacda waa la dabacsan yahay, makhaayada 8-aad ee maqaayada makhaayadaha ayaa qaali ku ah SR120 laakiin dhadhan fiican leh. Laga soo bilaabo SR500.
Aqalka Cad (Al-Qasr Al-Abiyad), Wadada Boqorka Abdul Aziz. Huteel wanaagsan oo ku yaal degmada Al-Dubat, oo leh dabeecad iyo wadar dhan 135 qol, dhammaantoodna waxaa lagu qalabeeyay TV iyo musqulo daba socda. Kali / labalaab SR160 / 200.
Swiss Spirit Hotel & Suites Metropolitan, Degmada Al Safaha Riyadh, (Degmo Ganacsi). 80 qolal waasac ah & qolal ballaaran oo leh dhammeystir heer sare ah, makhaayad laga cunteeyo maalintii oo dhan. Abaalmarinta Xawaaraha Sare Wi-Fi. Laga soo bilaabo SR 370 habeenki .. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dhamaadka sare, sicirka hoteellada ku yaal magaalada Riyadh ayaa si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxayna hadda ku dhow yihiin inay qaali u yihiin Dubai. Filo inaad bixiso waqooyiga SR600.
Al Faysaliah Hotel, Hotel Rosewood, Wadada King Fahad. Huteel raaxo leh oo bixiya tas-hiilaad shirar, shirar, aroosyo iyo dhacdooyin. Sidoo kale waxay bixisaa hoy, makhaayado iyo baakado fasax ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha iyo sidoo kale safar ganacsi. SR 1,400.
Al Khozama, Wadada Olaya. Mar waxay ka mid ahayd hudheelada sare ee Riyadh, laakiin hadda waxoogaa ayay ku sii jiraan iliga. Waxoogaa ciriiri ah laakiin qolal nadiif ah. Goobta ku xigta al-Faisaliah waa mid aad u fiican. Barkadda ku ag taal hudheelka waa bannaanka oo keliya oo uma nadiif aha sidaad rajayn lahayd, laakiin martida hudheelku waxay isticmaali karaan xarunta jir dhiska ee dhismaha xiga (Khozama Center, 1st floor) oo bixiya jimicsi heer sare ah, barkad weyn oo gudaha ah, tennis iyo Bowling. Internet bilaash ah qolalka ganacsiga (dabaqa 5aad). SR800.
Ascott Rafal Olaya Riyadh, 7706, Sahafa Olaya St. Waxaa lagu qalabeeyay guryo istuudiya, hal iyo laba qol jiif. Hantidan waxay bixisaa adeegyo qubeys oo bilaash ah iyo jimicsi goobta ku yaal. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Afar xilli Riyaad, Munaaradda Boqortooyada, Wadada King Fahd. Ma heleyso wax qaboojiye ah marka loo fiiriyo joogitaanka Dhismaha Boqortooyada ee 302-mitir laftiisa, afarta xilli-cayaareedna waxay muujinayaan waxaad ka filayso hudheel qaali ah Kali laga bilaabo SR1200, wuxuu labalaabmay SR1400.
Holiday Inn Al-Qasr, Olaya Main Road. Markii hore Howard Johnson Olaya Palace, laakiin si buuxda loo dayactiray oo dib loo furay 2007. Naqshad casri ah, qolal hufan, meel dhexe, jimicsi aasaasi ah. Internetka SR100 / maalin, quraac cunnada SR105. Qolalka laga helo SR550.
Hoteelka Intercontinental. Huteelka caanka ah ee booqda ganacsatada. Goobo waaweyn oo lagu kulmo, makhaayado wanaagsan, oo u dhow degmada ganacsiga Wadada Olaya.
Luthan Spa iyo Hotel, Wadada Aruba (Isbitaalka Indhaha Ee King Khalid). Hoteelkii ugu horreeyay uguna keliyeeyey haweenka ku yaal Sucuudiga. Inta badan dadka soo booqda waa kuwa maxalliga ah ee halkan u imanaya dalxiiska, laakiin sidoo kale waxaa jira 25 qol oo loogu talagalay martida habeenkii. SR350-979.
Marriott Riyaad. Aad baan ugu baahanahay waji u sameynta oo aan ku fiicnayn bariga bartamaha magaalada. Waxa ugu fiican ee la dhihi karo waa inay nadiif tahay oo xasilloon tahay. Markaad qolka ku jirto, waxaad si fudud u qiyaasi kartaa inaad ku sugan tahay Marriott kasta oo Mareykanka ah, xitaa musqulaha waxay umuuqdaan kuwo isku mid ah. Barkad dabaal oo gudaha ah oo aad u fiican, qol jimicsi oo heer sare ah (oo lagu daray khidmadda qolka). SR1000.
Radisson Blu Riyadh, King Abdulaziz St. Hoteel casri ah oo aad u raaxo badan leh taabashada Scandinavia. Jimicsi wanaagsan oo leh laba saunno iyo barkado, internet bilaash ah iyo quraac fiican. Waxay leedahay afar makhaayadood oo gudaha ah oo ay kujiraan Jabaaniis iyo mid Talyaani ah. SR800.
Hotel Sheraton, Wadada King Fahad. Soo gal: 3 PM, out-out: duhur. Hanti duug ah laakiin sifiican loo dayactiray oo qiyaastii 3 km waqooyiga ka xigta bartamaha magaalada, waxay ku anfacaysaa garoonka diyaaradaha iyo ganacsi. Makhaayado wanaagsan, laakiin wax uun kama jiraan masaafada socodka. SR900.
Hoteelka Swiss International Royal, Wadada King Fahad, Degmada Al Safaha. Hoteelka 4-Star, oo ka kooban 60 qol & qolal, naadi caafimaad, spa, 4 qol kulan & maqaaxi laga cunteeyo maalintii oo dhan. Laga soo bilaabo SR 490 habeenkii. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Isgaarsiinta magaalada Riyadh
Makhaayadaha internetka waxaa laga heli karaa kombuyuutarka souq ee Olaya. Riyaad waxay sidoo kale horay usii wadaysaa barnaamijkeeda "Smart City", oo isku dayi doonta inay si bilaash ah magaalada oo dhan uga siiso makhaayadaha waaweyn iyo hudheelada waaweyn, gaar ahaan Tahlia St ee aagga magaalada hoose.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada ka socda Riyadh
Wasaaradda arrimaha Islaamka
Riyaad way ka dhawrsan tahay Jeddah ama Gobolka Bariga. Haweenku waa inay isku daboolaan an cabaayad (waxaa laga heli karaa dukaamada meelkasta oo Riyad ah) waana lagugula talinayaa inaad sidoo kale qaadato indho shareer. Akhriso, fahanto oo raac tilmaamaha kujira qodobka Sacuudi Carabiya si aad dhibaatada uga fogaato.
Sanadihii 2002-2004, Riyaad waxay ahayd goobtii weeraro badan oo argagixiso ku saabsan reer Galbeedka, oo ay ku jiraan toogasho, qarax baabuur iyo afduubyo, oo ku dhammaaday qaraxyadii ka dhacay May 12, 2003 halkaas oo ay ku dhinteen 35 laguna dhaawacay in ka badan 160. Jawaab ahaan, ciidamada amniga ee Sucuudiga ayaa si arxan darro ah ula dhaqmay, mana jirin wax weerarro argagixiso ah oo ka dhacay Riyadh tan iyo 2004. Nabadgelyadu aad ayey u adag tahay in kastoo, gaar ahaan xeryaha guryaha ee ajaanibta, iyo booliska iyo cutubyada milatariga, oo inta badan aad u hubaysan, waa wax caan ku ah magaalada.
In kasta oo Riyadh mararka qaar lagu eedeeyo inay haysato mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee dambiyada adduunka, taxaddarrada caadiga ah waa in la qaadaa. Khatarta ugu weyn ee adiga kugu jirta ayaa ah driving. Darawallada badankood waxay ka soo jeedaan aagagga dalalka soo koraya iyo Bariga Dhexe oo aan lahayn sharciyada taraafikada, iskuulada wadista, ama xitaa waddooyinka arrintaas. Waa 'dhaqan wadista' halka suumanka kursiga, muraayadaha, karbaashyada haadka, astaamaha leexashada iyo xawaaraha xawaaraha la iska indhatiray. Waddo weyn oo afar-haad ah ayaa si fudud ugu beddeli karta 'taratigga orodka' ee toddobada haad ah. Ha ka xishoon geeskaaga. Sidoo kale, wax kasta oo aad sameyso, HA KU FADHIN qof farta / Bird maadaama si ka duwan looga qaaday Sacuudiga marka loo fiiriyo dowladaha reer galbeedka oo darawalada qaar ay qaataan ayaa halis gelin doonta noloshaada aargudasho!
Riyaad waxay noqon kartaa meel caqabad ku ah nolosha iyo ka shaqeynta. Tilmaamaha qaarkood ee la qabsiga fudud:
Diyaarso gaari iyo darawal, ama ugu yaraan diyaarso cabbi caadi ah. Tani way ka fududdahay, amnigeeduna aad buu uga jaban yahay ku tiirsanaanta tagaasida gaadiidka.
Abaabulaan maalintaada waqtiyada salaadaha, qado dambe (salaadda duhur kadib) iyo casho aad u soo daahay (salaadda maqrib kadib).
La macaamil ahaanshaha Sucuudiga ee ku wajahan qoyska waa wax aan macquul aheyn, sidaa darteed la xiriir bulshada ajaanibta ah ee maxalliga ah haddii aad rabto inaad yeelato muuqaal nolosha bulshada ah. Shabakad isku xiran oo ka kooban dad ka kala socda jinsiyado kala duwan ayaa kuu oggolaaneysa inaad aqoon fiican u leedahay safaaradaha iyo dhinacyada gaarka loo leeyahay.
Isku day inaad ka baxdo Riyadh maalmaha fasaxa ah beddel goobta. In kasta oo xeerarka ragga keligood ah ee galaya xarumaha laga dukaamaysto dhowaan la dabcay, mid ayaa si dhakhso ah u dhammaanaya ikhtiyaarrada iyada oo aan la sii qorshaynin dhacdooyinka gaarka loo leeyahay.
In la xushmeeyo diinta Islaamka loona hogaansamo shuruucda adag ee Islaamka ee dalka ka jira. In kasta oo ay dhif tahay, haddana waxaa jira kiisas la xiriira reer Galbeedka oo la xiray, la masaafuriyay, isla markaana la ciqaabayo jir ahaan muujinta calaamadaha ixtiraam darrada. Ha filan dabacsanaan haddii aad tahay Muslim, Koonfurta Aasiya ama Aasiyada Koonfur-bari. Riyadh waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu adag Sacuudi Carabiya.
Safaaradaha & Qunsuliyadaha Riyadh
Pakistan, Quarter Al Safarat, Telefoon: +966 11 488 4111
Finland, Quar Diblomaasiyadeed, Riyadh,, fax: + 966 1-488 2520. Sa-We 8 AM-3: 45PM.
Greece, POBox 94375, Riyadh 11693,, fax: + 966 1-4801969.
Indonesia, Quar Diblomaasiyadeed, PO Box 94343, Riyadh 11693. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
United States of America,, fax: + 966 1-4887360.
Haddii miisaaniyaddaadu ay u fiddo duulimaadyo, Sacuudi Carabiya ayaa ah lo’daada, iyada oo waddanka oo dhan laga joogo illaa 1.5-saac oo laga bilaabo Riyadh.
Jeddah - waa dekedda ugu weyn ee ku taal Badda Cas iyo marinka Maka iyo Madiina, laakiin sidoo kale quusin wanaagsan
Baxrayn - hadaad baabuur leedahay, 4-ta saacadood ee aad ku dhex socotid lamadegaanka una gudubto gobolka isbarbardhiga xorta ah ee Bahrain ma aha mid aad u xun
Dubai - Magaalada cusub ee raaxada leh ee Bariga Dhexe. Haddii aad baabuur leedahay, waxay noqon doontaa waddo 7-saac oo bari ah oo lamadegaanka loo maro. Duulimaadyada rakhiis ah, qiyaastii 1.5 saacadood, ku qaado duulimaad qiimo jaban magaalada Sharjah.
Haddii aad diyaar u tahay inaad waxbadan kharash gareyso, waxaa jira goobo dhaqameed iyo cawaysyo qurux badan oo 3-saac duulimaad ah (iyo usd 300) gacan.
Beirut - Sacuudi Carabiya Airlines & Bariga Dhexe waxay siisaa xiriir aad u fiican dhowr jeer maalintii. Haddii aad ku cabayso diyaarad, MEA ayaa kuu noqon doonta xulashadaada, maadaama Saudia aysan khamri ugu adeegin duullimaadyadeeda midkood.
Muscat - Khasnaddan Carabtu waxay siisaa saldhig guri oo wanaagsan oo loogu talagalay sahaminta Cumaan iyo hiddaheeda dabiiciga iyo dhaqanka iyadoo la siinayo fursado badan oo waayo-aragnimo iyo aqoonyahanno khibrad u leh si isku mid ah.
Baadhitaano badan oo muslimiinta Sucuudiga taga
Hotelka Boudl Al Faisaliah Riyadh
Barxadda Magaalada Marriott Riyadh Diplomatic Quarter Hotel
Fuliyaasha Riyadh Hotel
Tulipka Dahabka ah ee Andalusia Riyadh
Hotelka InterContinental Riyadh
Hoteelka Khelaiwi Olaya Riyadh
Guryaha Fulinta ee Marriott Riyadh Makarim
Riyaad Marriott Hotel
eHalal Safarka Mart > Safarka Islaamka ee Sacuudiga > Tilmaamaha Safarka Riyaad Xalaal
Hagaha Socdaalka Mae Sai Halal